Elavil - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Elavil
Generic Name: Elavil Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Elavil ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Elavil®ဟာ tricyclic အုပ်စုဝင် စိတ်ကျကုသဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ Elavil® မှာ စိတ်ကျဝေဒနာ ခံစားရသူတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ဦးနှောက်တွင်း ဓါတုပစ္စည်း မညီမျှမှုတွေကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ အစွမ်းရှိတာမို့ စိတ်ကျဝေဒနာကို ကုသရန် အသုံးပြုပါတယ်။
ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်းသောက်ပါ။ ဆေးညွှန်းစာမှ အချက်အလက်အားလုံးကို လိုက်နာပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏထက် ပိုသောက်ခြင်း၊ လျှော့သောက်ခြင်း၊ အချိန်ကြာကြာသောက်ခြင်း မပြုပါနဲ့။ ဝေဒနာတွေက သက်သာအောင် လေးပတ်လောက်အထိ စွဲသောက်ရနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း သောက်ပေမယ့် ဝေဒနာမသက်သာရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြန်လည်ပြသပါ။
Elavil® သောက်နေစဉ်မှာ ခွဲစိတ်မှုခံယူဖို့ ရှိလာရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။ ဆေးသုံးစွဲခြင်းကို ခဏလောက် ရပ်တန့်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Elavil®ကို ရုတ်တရက် မဖြတ်လိုက်ပါနဲ့။ ဆေးဖြတ်လိုက်ချိန်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ Elavil® ကို ဘေးကင်းအောင် ဘယ်လိုရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Elavil®ကို အခန်းအပူချိန်မှာ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့အောင်၊ စိုစွတ်မှု မရှိအောင် သိမ်းဆည်းတာဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းခြင်း မဖြစ်ရအောင် ရေချိုးခန်းတွင်း သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုရပါ။ Elavil®ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းခြင်းမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Elavil®ကို အိမ်သာတွင်းထဲ ပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်း မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့ရင်၊ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားရင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လို စွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Elavil အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Elavil®တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း
လတ်တလော နှလုံးထိခိုက်ထားဖူးခြင်းရှိရင် Elavil® မသောက်သင့်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ရက်အတါင်း MAOI အုပ်စုဝင်ဆေးကို သုံးထားဖူးရင် Elavil® ကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ MAOI ဆေးအမျိုးအစားတွေကတော့ isocarboxazid, linezolid, methylene blue injection, phenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine စတဲ့ ဆေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်အချို့မှာ စိတ်ကျဆန့်ကျင်ဆေး စတင်သုံးချိန်မှာ သေကြောင်းကြံစည်လိုတဲ့ အတွေးတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ပုံမှန်ထိတွေ့သင့်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေကရော ပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူတွေပါ လူနာရဲ့ စိတ်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Elavil ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Elavil®ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီ ဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန် သင့်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Elavil®ဆေးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။)
Elavil ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဓါတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အင်ပျဉ်ထခြင်း၊အရေပြားပေါ်အကွက်ဖြစ်ခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊အသက်ရှူခက်ခြင်း၊မျက်နှာနှုတ်ခမ်းလျှာလည်ချောင်းစတာတွေ ရောင်ရမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပွားရင်အရေးပေါ် ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
လက္ခဏာအသစ်တွေပေါ်လာရင် ပိုမို ဆိုးရွားလာခြင်းရှိရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ဥပမာ စိတ်ပိုင်းနှင့် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ ကြောက်လန့်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ တခုခုကို မလုပ်ဘဲ မနေနိုင်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှု မရှိခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်ခြင်း၊ ဆောက်တည်ရာမရခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ပိုကျဆင်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကု ဒုက္ခပေးစိတ် သေကြောင်းကြံစည်စိတ်များ ပေါ်လာခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါလက္ခဏာတွေရှိရင် ဆရာဝန် ချက်ချင်းပြပါ။
ပုံမှန်မဟုတ်သော အတွေးများ၊ အမူအကျင့်များ
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ကြပ်ခြင်း၊ မေးရိုးနှင့် ပခုံးသို့ နာကျင်မှုပျံ့သွားခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း
ရုတ်တရက် အားနည်းခြင်း၊ နေမကောင်းဖြစ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ပါးစပ်အနာဖြစ်ခြင်း၊ သွားဖုံးများ နီရဲရောင်ရမ်းခြင်း၊ အစာမျိုရန်ခက်ခြင်း
ပါးစပ်နာခြင်း၊ အရသာပြောင်းခြင်း၊ လျှာမည်းခြင်း
အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် ပြောင်းခြင်း
ရင်သားများ ရောင်ရမ်းခြင်း (အမျိုးသားများရော အမျိုးသမီးများပါ)
ဘယ်ဆေးတွေက Elavil နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Elavil®ဟာ သင်ယခု သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
အောက်ပါဆေးဝါးများဟာ Citalopram နဲ့ ဓါတ်ပြုမှု ရှိပါတယ်။
flecainide, propafenone, quinidine နှင့် နှလုံးခုန်ခြင်းအပေါ် သက်ရောက်သော အခြားဆေးများ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာများ ကုသသောဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Elavil နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Elavil®ဟာ အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိ မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Elavil နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Elavil®ဟာ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါရောဂါများရှိလျှင် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ကစဉ့်ကလျား ရောဂါ
နှလုံးထိခိုက်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ တက်ခြင်း ရောဂါရာဇဝင်ရှိသူများ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Elavil ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပုံမှန်ပမာဏ။ တရက်လျှင် ၇၅ မီလီဂရမ် သောက်ဆေးအနေဖြင့် အချိန်ခွဲသောက်ရန်၊ လိုအပ်ရင် တရက်ကို စုစုပေါင်း ၁၅၀ မီလီဂရမ်ထိ သောက်နိုင်ပါတယ်။
အခြားပမာဏ။ ၄၀ မှ ၁၀၀ မီလီဂရမ်ထိ အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် သောက်ဆေးအနေဖြင့် သောက်ရန်။ လိုအပ်ရင် ၂၅ (သို့) ၅၀ မီလီဂရမ်ထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး တရက်ကို စုစုပေါင်း ၁၅၀ မီလီဂရမ်ထိ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အများဆုံးပမာဏ။ တရက်လျှင် ၁၅၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေးအနေဖြင့်
ကနဦးပမာဏ။ တရက်လျှင် ၁၀၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေးအနေဖြင့်
ဆက်လက်သောက်သုံးရမည့် ပမာဏ။ ၄၀ မှ ၁၀၀ မီလီဂရမ်ထိ အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် သောက်ဆေးအနေဖြင့် သောက်ရန်။
အများဆုံးပမာဏ။ တရက်လျှင် ၃၀၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေးအနေဖြင့်
တခါသောက် ၁၀မီလီဂရမ်ဖြင့် တရက်လျှင် ၃ကြိမ်နှင့် ညအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် ၂၀ မီလီဂရမ်သောက်ရန်။
ကလေးတွေအတွက် Elavil ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Elavil®ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများ၊ အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်
ဆေးပြားများ။ suvorexant မီလီဂရမ်
Elavil®ဆေးကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံး သုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ အကြိမ်ကို ကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာသာ သုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်း မလုပ်ပါနဲ့။